Nyika Yenhare muUS | Martech Zone
Hurumende yeMafoni muUS
Chipiri, Kurume 11, 2014 NeChishanu, Kurume 14, 2014 Douglas Karr
Kushandiswa kwenhare pakati pevatengi kunoramba kuchikwira. 74% yekukura yaive mumafoni efoni ne79% yeUS Vatengi vachivhura nekutenga pamasaiti nemaapp. Pakazosvika 2016 mobile app revenues icharova $ 46 bhiriyoni. Kuenzanisa zvinorehwa neshanduko inoshamisa yezviratidzo kune vanhu vari Usablenet isa pamwe infographic iyo inoratidza kuti ingani nharembozha yekushandisa kweInternet iri kuchinja nzira iyo vatengi vanobatana nayo nemabrugwa pawebhu.
Usablenet masimba nharembozha uye zviitiko zve multichannel zvevatengi vanopfuura mazana mana vanosanganisira vazhinji vevatengesi vepasirese, kufamba uye maronda ebasa.
Tags: conversion ratezororo zvekutenga maitiromazororoMobile Appsmobile kutengesanharembozha webhupamhepo kutenga mazororopiritsi rekutengesamahwendefanguva inoshandiswa
Ivo Havana kumbodzidzisa izvi muKirasi Yekutengesa
Mukana weBeacon Kushambadzira